Isitudiyo segadi epholileyo Kufuphi nesibhedlele saseSt.Luke
Ukuhombisa ngononophelo kunye nendibaniselwano ye-classic, i-vintage kunye nesitayela samanje, umoya opholileyo. Isitudiyo esizimeleyo kumgangatho ophantsi we-maisonette enemigangatho emithathu. Ibekwe kwindawo evaliweyo yokuhlala enikezela indawo ekhuselekileyo nekhuselweyo.
Umgangatho ophantsi ozimeleyo we-maisonette enamanqanaba amathathu kwindawo yokuhlala evaliweyo. Indawo engqongileyo ekhuselekileyo nekhuselweyo. Indawo yokwamkela ngononophelo kunye nokuhlobisa okugqwesileyo. Inebhedi ephindwe kabini. Ubumelwane obuzolileyo, ubume obuqaqambileyo kunye nokuphumla.
1.00 km ukusuka kwiklinikhi Agios Loukas, 1.5 km ukusuka ikholeji eAnatolia, 14km ukusuka kwelaseMakedoni moya, 10 km ukusuka kwiziko isixeko 6 km ukusuka yonke lweMeditera Shopping Centre, 13km ukusuka Pinewood International School of Thessaloniki, 700 leemitha ukusuka kwimarike Super Sklavenitis. 2km embindini panorama
Ihlala ikhona umamkeli onobuhlobo kwaye ulumkile
Inombolo yomthetho: 00000176890